ဓာတုဗေဒနှင့်အမူအကျင့်စွဲမှု၏ Neurobiology (၂၀၀၆) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
အဆိုပါပစ္စည်းများ၏ Neurobiology နှင့်အပြုအမူစွဲ (2006)
မှတ်ချက်များ - ရွယ်တူချင်းပြန်လည်သုံးသပ်သည့်လေ့လာမှုတစ်ခုအနေဖြင့်သိသာထင်ရှားသည့်ဖော်ပြချက် - အမူအကျင့်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲမှုများသည်အာရုံကြောလမ်းကြောင်းများ၊ ဦး နှောက်ယန္တရားများနှင့်အပြုအမူများနှင့်ထပ်တူထပ်တူကျသည်။
ဤသုံးသပ်ချက်မှ - "သက်သေအထောက်အထားအများအပြားလိုင်းများအမူအကျင့်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲအကြားဆက်ဆံရေးကိုထောကျပံ့။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အမူအကျင့်နှင့်ပစ္စည်းစွဲလမ်းမှုသည်တူညီသည့်အဓိကလက်တွေ့လက္ခဏာများကိုမျှဝေသည်။ ပြtheနာအပြုအမူအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုလျော့နည်းသွား; အဆိုပါပြaticနာအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ကြိုတင်တစ် ဦး အရှိန်အဟုန်တိုက်တွန်းသို့မဟုတ်တပ်မက်ပြည်နယ်; ပြtheနာရှိသောအပြုအမူ၏စွမ်းဆောင်ရည်စဉ်နှင့် hedonic အရည်အသွေးတို့ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သက်သေအထောက်အထားများအရစိတ်ကြွဆေးထိန်းချုပ်မှုမမှန်မှုများသည်သည်းခံခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ရပ်တန့်ရန်မအောင်မြင်သောကြိုးပမ်းမှုများအပါအ ၀ င်အရာဝတ္ထုအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်အတူအခြားဘုံအင်္ဂါရပ်များကိုမကြာခဏဝေမျှသည်။ ဘဝလည်ပတ်မှု၏အဓိကနယ်ပယ်များတွင်ချို့ယွင်းချက် "
အပြည့်အဝလေ့လာမှု: ပစ္စည်းနှင့်အမူအကျင့်စွဲ၏ Neurobiology
အပြုအမူများစွာသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာ ၀ တ္ထုကိုစားသုံးခြင်းအပြင်ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များကိုသိသောကြောင့် ဆက်လက်၍ အပြုအမူများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ရေတိုအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိစေသည်။ ဤရွေ့ကားမမှန်သမိုင်းကြောင်းအတော်ကြာနည်းလမ်းများအတွက် conceptualized ပါပြီ။ အမြင်တစ်ခုကဤရောဂါများကိုထကြွလွယ်သော compulsive ရောင်စဉ်တလျှောက်လဲလျောင်းနေပြီးအချို့ကို Impulse Control Disorders ဟုသတ်မှတ်သည်။ တစ် ဦး ကအခြား, ဒါပေမယ့်အပြန်အလှန်သီးသန့်မဟုတ်, အယူအဆစိတ်ရောဂါ Non- ပစ္စည်းဥစ္စာသို့မဟုတ် "အပြုအမူ" စွဲအဖြစ်ယူဆသည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုအကြားဆက်နွယ်မှုအကြောင်းဆွေးနွေးပါ။ နည်းလမ်းများ: ကျနော်တို့ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မှုရောဂါများသို့မဟုတ်အမူအကျင့်စွဲနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲအကြားတူညီခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုသရုပ်ဖော်ဒေတာပြန်လည်သုံးသပ်။ ဤခေါင်းစဉ်သည်လာမည့်ပဉ္စမထုတ်အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်းမှစိတ်ရောဂါဆိုင်ရာစာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်တွင်ဤရောဂါများ၏အကောင်းဆုံးအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
ကြီးထွားလာသည့်အထောက်အထားများအရအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုသည်သဘာဝသမိုင်း၊ ဖြစ်ရပ်များ၊ သည်းခံနိုင်မှု၊ သက်ရောက်မှုရှိခြင်း၊ ထပ်တူထပ်မျှမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှု၊ ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်ပစ္စည်းမဟုတ်သောစွဲနှစ် ဦး စလုံးလွှမ်းခြုံ။ လက်ရှိဒေတာများအရဤပေါင်းစပ်ထားသောအမျိုးအစားသည်ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာလေ့လာထားသည့်အပြုအမူဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှု (ဥပမာ - အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု) အတွက်သင့်လျော်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ အခြားအဆိုပြုထားသောအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုအမျိုးအစားများကိုမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြရန်လက်ရှိအချိန်တွင်အချက်အလက်မလုံလောက်ပါ။
keywords: အမူအကျင့်စွဲ, ခွဲခြား, ရောဂါ, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မှုရောဂါ, ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုရောဂါ, compulsivity, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု, impulisivity
အပြုအမူများစွာသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာ ၀ တ္ထုကိုစားသုံးခြင်းအပြင်ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များကိုသိသောကြောင့်အမြဲတမ်းအပြုအမူများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ရေတိုအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိစေသည်။ ထိန်းချုပ်မှုလျော့နည်းသွားခြင်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုမှုသို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှု၏အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ ဤတူညီမှုသည်ပစ္စည်းမဟုတ်သော (သို့) အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုဟူသောအယူအဆကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာပစ္စည်းစွဲလမ်းမှုနှင့်အလားတူသောရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်သည်။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုသဘောတရားသည်သိပ္ပံဆိုင်ရာနှင့်လက်တွေ့ heuristic တန်ဖိုးအချို့ရှိသော်လည်းအငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်နေသည်။ DSM-V ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေအနေတွင်အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုနှင့် ပတ်သတ်၍ ပြနာများကိုလက်ရှိတွင်ဆွေးနွေးငြင်းခုံလျက်ရှိသည် (1,2)
အများအပြားကအမူအကျင့်စွဲပစ္စည်းဥစ္စာစွဲတူညီရှိခြင်းအဖြစ်တွေးဆခဲ့ကြသည်။ လက်ရှိရောဂါရှာဖွေရေးနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်၊th Edition (DSM-IV-TR) သည်ဤရောဂါများ (ဥပမာ - ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်း၊ kleptomania) အတွက်ပုံမှန်ရောဂါရှာဖွေခြင်းစံသတ်မှတ်ချက်ကိုသတ်မှတ်ထားပြီး၎င်းတို့အားစိတ်ကြွဆေးထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာရောဂါများ၊ ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်ခွဲခြားထားသည်။ အခြားအပြုအမူများ (သို့မဟုတ် Impulse Control disorders) သည်လာမည့် DSM တွင်ပါ ၀ င်ရန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည် - မသင်မနေရ ၀ ယ်ခြင်း၊ အရေပြားရောဂါရှာဖွေခြင်း၊ လိင်စွဲလမ်းမှု (paraphilic hypersexuality)၊ အလွန်အကျွံ tanning၊ ကွန်ပျူတာ / ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်အင်တာနက်စွဲခြင်း။ အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုအဖြစ်ထည့်သွင်းရန်မည်သည့်အပြုအမူများကိုဆွေးနွေးငြင်းခုံရန်ဖွင့်နေသေးသနည်း (3) ။ အားလုံးမဟုတ်သော Impulse Control Disorders သို့မဟုတ် impulsivity ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုဟုသတ်မှတ်သင့်သည်။ Impulse Control Disorders (ဥပမာ - ရောဂါဗေဒလောင်းကစား၊ Kleptomania) သည်အဓိကအကြောင်းအရာများအားဆေးစွဲမှုများနှင့်ဝေမျှပုံရသော်လည်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပေါက်ကွဲစေသောရောဂါကဲ့သို့အခြားသူများမှာမူမလုပ်နိုင်ပါ။ ဤဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုတွင်ပါ ၀ င်ရန်မျှော်လင့်ချက်တွင်ဤစာတမ်းသည်အမူအကျင့်စွဲခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါများအကြားတူညီမှု၊ obsessive compulsive disorder နှင့်အနာဂတ်သုတေသနအတွက်ခိုင်လုံသောမသေချာမရေရာမှုများကိုသက်သေထူသည်။ ၎င်းသည်ဆက်နွှယ်သောစွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများကိုပိုမိုအသေးစိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်သောဤစာစောင်ရှိနောက်ဆက်တွဲစာတမ်းများကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။
အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှု၏အဖြစ်များသောအရာများ - ၀ တ္ထုအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်ဆက်စပ်မှု
အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှု၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်မှာလူတစ် ဦး သို့မဟုတ်အခြားသူများအားအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့်လုပ်ရပ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ရန်လှုံ့ဆော်မှု၊ မောင်းနှင်မှုသို့မဟုတ်သွေးဆောင်မှုကိုတွန်းလှန်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်း (4) ။ တစ်ခုချင်းစီကိုအပြုအမူစွဲတစ်ခုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဒိုမိန်းအတွင်းမှာဒီမရှိမဖြစ်အင်္ဂါရပ်ရှိပါတယ်တဲ့မှုများထပ်တလဲလဲအပြုအမူပုံစံဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဤအပြုအမူများတွင်ထပ်ခါတလဲလဲပါ ၀ င်မှုသည်နောက်ဆုံးတွင်အခြားသောနယ်ပယ်များ၌လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုနှောင့်ယှက်သည်။ ဤအမှု၌, အမူအကျင့်စွဲပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုရောဂါဆင်တူသည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲသူများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသောက်သုံးခြင်း (သို့) မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းများကိုတွန်းလှန်ရန်အခက်အခဲရှိကြောင်းတင်ပြကြသည်။
အမူအကျင့်နှင့်ပစ္စည်းစွဲစွဲလမ်းမှုသည်သဘာဝသမိုင်း၊ ဖြစ်ရပ်နှင့်ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များစွာတွင်တူညီသည်။ နှစ် ဦး စလုံးသည်လူကြီးများနှင့်ငယ်ရွယ်သောလူကြီးများနှင့်ဤအသက်အရွယ်အုပ်စုများတွင်သက်ကြီးရွယ်အိုများထက်ပိုမိုမြင့်မားသောနှုန်းထားများရှိကြသည် (5) ။ နှစ် ဦး စလုံးတွင်သဘာ ၀ သမိုင်းကြောင်းရှိသည်၊ နာတာရှည်ပြန်ဖြစ်လာသည့်ပုံစံများရှိသော်လည်းလူအများစုတို့သည်ပုံမှန်ကုသမှုမခံရဘဲမိမိတို့ဘာသာပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ခြင်း (“ အလိုအလျောက်” နှုတ်ထွက်ခြင်း) (6).
အပြုအမူစွဲလမ်းမှုသည်“ လုပ်ရပ်မကျူးလွန်မီတင်းမာမှုသို့မဟုတ်နှိုးဆွမှု” နှင့်“ လုပ်ရပ်ကျူးလွန်ချိန်၌ပျော်ရွှင်မှု၊4) ။ ဤအပြုအမူများ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိသဘောသဘာဝသည်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုအပြုအမူများ၏အတွေ့အကြုံနှင့်အတွေ့အကြုံနှင့်ဆင်တူသည်။ ၎င်းသည်အတ္တ -distonic သဘာဝနှင့် obsessive-compulsive disorder သို့သော်အမူအကျင့်နှင့်ပစ္စည်းစွဲစွဲမှုနှစ်ခုလုံးသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအတ္တဆန်ဆန်လျော့နည်းလာပြီးအတ္တဒိုင်ဆန်ဆန်ပိုမိုဖြစ်လာနိုင်သည်။2,7), သို့မဟုတ်အပြုသဘောအားဖြည့်ခြင်းဖြင့်လျော့နည်းလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်လာနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအားဖြည့် (ဥပမာ, dysphoria သို့မဟုတ်ဆုတ်ခွာ၏ကယ်ဆယ်ရေး) က။
အမူအကျင့်နှင့်ပစ္စည်းစွဲစွဲလမ်းမှုသည်ထူးခြားသောတူညီမှုများရှိသည်။ အမူအကျင့်စွဲလမ်းနေသူများစွာသည်အမူအကျင့်ကိုမစတင်မှီတွန်းအားသို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှုအခြေအနေကိုဖော်ပြကြသည်။ ထို့အပြင်ဤအပြုအမူများသည်မကြာခဏစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုလျော့နည်းစေပြီးအပြုသဘောဆောင်သည့်စိတ်အခြေအနေသို့မဟုတ်အခြေအနေများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ဆင်တူသည်။ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်အပြုအမူနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများကိုစွဲလမ်းစေနိုင်သည်။8) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း၊ kleptomania၊ လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဝယ်ယူမှု ၀ ယ်ခြင်းများရှိသည့်လူများစွာသည်ဤအပြုသဘောစိတ်ဓာတ်သက်ရောက်မှုများထပ်ခါတလဲလဲအပြုအမူများနှင့်သည်းခံစိတ်နှင့်အလားတူသည့်ခံစားမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိရန်အပြုအမူ၏ပြင်းထန်မှုကိုတိုးမြှင့်ရန်လိုအပ်သည် (9-11) ။ ဤအပြုအမူစွဲလမ်းမှုနှင့်အတူများစွာသောသူတို့သည်အပြုအမူများမှရှောင်ကြဉ်စဉ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြပြီးရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့်ဆင်တူသည်။ သို့သော်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့်မတူဘဲအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများမှဇီဝကမ္မဆိုင်ရာထင်ရှားသောသို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအလေးအနက်ထားသောဆုတ်ခွာမှုသတင်းများမရှိပါ။
အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုများကိုအများဆုံးစေ့စပ်စွာလေ့လာခဲ့သောရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းသည်အမူအကျင့်စွဲခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းဆိုင်ရာမသန်စွမ်းမှုများ၏ဆက်နွယ်မှုကိုထပ်မံထိုးထွင်းသိမြင်စေသည် (Wareham and Potenza, ဤပြissueနာကိုလည်းကြည့်ပါ) ။ ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းသည်များသောအားဖြင့်ကလေးဘဝ (သို့) မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် မှစ၍ ယောက်ျားများသည်အစောပိုင်းအရွယ်များမှစတင်လေ့ရှိကြသည်။5,12), ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်များ၏ပုံစံထင်ဟပ်။ အမြိုးသမီးမြားတှငျအမြိုးသမီးမြား၌အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းဖြစ်ရပ်ဆန်းနှင့်အတူရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏မြင့်မားသောနှုန်းထားများ, နှင့်လေ့လာတွေ့ရှိကြသည် (ဆိုလိုသည်မှာအမျိုးသမီးများသည်စွဲလမ်းအပြုအမူအတွက်နောက်ပိုင်းတွင်ကန ဦး ထိတွေ့ဆက်ဆံပေမယ့်ကန ဦး ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကနေစွဲအထိအချိန်အတိုကောက်) (13) ။ တယ်လီစကုပ်ဖြစ်စဉ်ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မှတ်တမ်းတင်ထားသည် (14).
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပြordersနာများကဲ့သို့ပင်ငွေကြေးနှင့်အိမ်ထောင်ရေးပြproblemsနာများသည်အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲသူများနှင့်အတူအမူအကျင့်စွဲသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများကိုရန်ပုံငွေထည့် ၀ င်ခြင်းသို့မဟုတ်အပြုအမူ၏အကျိုးဆက်များကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်းစသည့်တရားမ ၀ င်လုပ်ရပ်များဖြစ်သောခိုးခြင်း၊15).
အမူအကျင့်စွဲခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများရှိသူများသည်မိမိကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရှာဖွေသည့်အစီအမံများနှင့်အန္တရာယ်များကိုရှောင်ရှားခြင်း၏ယေဘုယျအားဖြင့်နိမ့်ကျသည်။16-20) ။ သို့သော်အင်တာနက်စွဲခြင်းသို့မဟုတ်ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းစသည့်အပြုအမူဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုရှိသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အနေဖြင့်လည်းအန္တရာယ်များကိုရှောင်ရှားရန်မြင့်မားသောအဆင့်များကိုအစီရင်ခံနိုင်သည် (၂၁; Weinstein and Lejoyeux, ဤပြthisနာကိုလည်းကြည့်ပါ) ။ အခြားသုတေသနများအရ psychoticism၊ လူ့အသိုက်အ ၀ န်းပconflictိပက္ခနှင့်မိမိကိုယ်ကိုညွှန်ကြားခြင်းတို့သည်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နိုင်သည် (Weinstein and Lejoyeux, ဤပြseeနာကိုကြည့်ပါ) ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်, စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးစွဲမက်စေသည့်ရောဂါရှိသည့်သူများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အန္တရာယ်ရှောင်ရှားခြင်းနှင့်စိတ်မသက်မသာဖြစ်မှုအပေါ်အနိမ့်ဆုံးရကြသည်။17,21) ။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုရှိသည့်သူများသည်အတင်းအကျပ်စေခိုင်းမှုများကိုမြင့်မားစွာဂရုပြုနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုအားနည်းခြင်းနှင့်မော်တာအပြုအမူများထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ခြင်းများရှိနိုင်သည်။22) ။ သိမ်မွေ့စွာဖိအားပေးရောဂါနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရေပြားရွေးခြင်း (စိတ်စွဲလမ်းမှုပိုမိုမြန်ဆန်သောဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုများနှင့်အတူအပြုအမူစွဲလမ်းမှု) သည်သိပ္ပံနည်းကျရှုပ်ထွေးမှု (အတင်းအကျပ်ဖြစ်စဉ်ကိုအထောက်အကူပြုမည်ဟုထင်မှတ်) ရှိသော်လည်းတစ် ဦး ချင်းစီတွင်မော်တာတုံ့ပြန်မှု (impulsivity) ကိုတားဆီးဟန့်တားထားသည် compulsivity ရောဂါ (23,24).
တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ကိုယ်စားပြုသောလေ့လာမှုများတွင်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်းမပါ ၀ င်သော်လည်း၊ လက်ရှိရောဂါကူးစက်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များသည်ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုထောက်ခံသည်။25,26) ။ စိန့်လူးဝစ္စကူးစက်ရောဂါဖမ်းဆီးရမိstudyရိယာ (ECA) ၏လေ့လာမှုအရ ၀ တ္ထုအသုံးပြုမှုရောဂါများ (နီကိုတင်းမှီခိုမှုအပါအ ၀ င်) နှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းများတွင်တွဲဖက်ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်မားခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်း၊25) ။ ကနေဒါ epidemiological စစ်တမ်းတစ်ခုအရအရက်သောက်ခြင်းရောဂါအတွက်ဆိုးရွားသောလောင်းကစားသည်ပစ္စုပ္ပန်တွင် ၃.၈ ဆတိုးခဲ့သည်ဟုခန့်မှန်းခဲ့သည်။27) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုနေရသူများအကြားအလယ်အလတ်နှင့်ပြင်းထန်သောလောင်းကစားခြင်းအန္တရာယ်မှာ ၂.၉ ဆပိုမိုမြင့်မားသည် (28) ။ US လူ ဦး ရေအခြေပြုလေ့လာမှုများအရလောင်းကစားခြင်းနှင့်အရက်သောက်ခြင်းရောဂါများအကြားအလေးသာမှုအချိုး ၃.၃ မှ ၂၃.၁ အထိရှိသည်။25; 29) ။ ကျား၊ မ၊ အသက်နှင့်စိတ်ကျရောဂါတို့ကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ကောလိပ်ကျောင်းသား ၂,၄၅၃ ကိုလေ့လာရာ၌အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုသည်အရက်သုံးစွဲမှု (အလေးသာမှုအချိုး ၁.၈၄) နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။30).
အခြားအမူအကျင့်စွဲဆေးခန်းများ၏နမူနာနမူနာများကပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းမမှန်မှုများနှင့်အတူတွဲဖက်ခြင်းဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ကအကြံပြုသည်။စားပွဲတင် 1) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်အမူအကျင့်စွဲပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုရောဂါနှင့်အတူဘုံ pathophysiology မျှဝေစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
သို့သော်အကြောင်းပြချက်ဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များသည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာအဆင့်တွင်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သောကြောင့် (ဥပမာ၊ အရက်အသုံးပြုမှုသည်စွဲလမ်းစေသောလက္ခဏာများအပါအ ၀ င်မသင့်လျော်သောအပြုအမူများကိုတားမြစ်ထားသည်) ဥပမာအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုသတိကြီးစွာ ထား၍ အနက်ဖွင့်ရမည်။ အရက်သောက်သုံးခြင်းအစားအစားအသောက်အစားထိုးပြီးနောက်အမူအကျင့်စွဲသည်စတင်သည်။ မကြာခဏအရက်သောက်သုံးသောပြgambနာရှိသည့်လောင်းကစားသူများသည်လောင်းကစားခြင်းပြင်းထန်မှုနှင့်လောင်းကစားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများပိုများလာသည်။31) နှင့်အသင့်အတင့်သောက်သုံးသောက်သုံးသူများအတွက်အသင့်အတင့်သောက်သုံးသူများသည်မသောက်သူများထက်မကြာခဏလောင်းကစားလေ့ရှိကြသည် (32), အရက်နှင့်လောင်းကစားအကြားအမူအကျင့်အပြန်အလှန်အကြံပြုခြင်း။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်နီကိုတင်းသုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အလားတူတွေ့ရှိချက်သည်လက်ရှိသို့မဟုတ်ယခင်ဆေးလိပ်သောက်သူများ၌ရောဂါဖြစ်ပွားမှုလောင်းကစားဝိုင်းရှိလူကြီးများသည်သိသိသာသာပိုမိုအားကြီးစွာလောင်းကစားခြင်းကိုတိုက်တွန်းသည်။33) ။ နေ့စဉ်ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲသောပြProbleနာရှိသည့်လောင်းကစားသမားများသည်အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပြproblemsနာများပိုများနိုင်သည်။34).
စိတ်ကျရောဂါဆိုင်ရာအဓိကစိတ်ကျရောဂါ၊ စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါ၊ စိတ်စွဲလမ်းမှုမသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာရောဂါနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှုအလွန်များပြားသည့်ရောဂါများစသည့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲချက်များနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိလေ့ရှိသည် (35,36; Weinstein and Lejoyeux, ဤပြseeနာကိုလည်းကြည့်ပါ) ။ သို့သော်ဤ comorbidity လေ့လာမှုများအများအပြားလက်တွေ့နမူနာအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ကြသည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များသည်ရပ်ရွာလူထုအတွက်မည်မျှအတိုင်းအတာအထိယေဘူယျအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ရန်ကျန်ရှိသည်။
အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲစွဲလမ်းမှုနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများသည်ဘုံသိမှုလက္ခဏာများရှိနိုင်သည်။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမသန်စွမ်းသူနှစ် ဦး စလုံးပုံမှန်အားဖြင့်ဆုလာဘ်လျှော့စျေး (37) နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်အားနည်းချက်လုပ်ဆောင် (38ထိုကဲ့သို့သောအိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task အဖြစ်, စွန့်စားမှု - ဆုဆုံးဖြတ်ချက်ချအကဲဖြတ်တဲ့ပါရာဒိုင်း (39) ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုလေ့လာခြင်းသည်အိုင်အိုဝါလောင်းကစားလုပ်ငန်းတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်ထိုကဲ့သို့သောလိုငွေပြမှုများမရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။40) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမား ၄၉ ယောက်၊ အရက်မှီခိုသူ ၄၈ ဦး နှင့်ထိန်းချုပ်မှု ၄၉ ခုတွင်ပြည့်စုံသော neurocognitive ဘက်ထရီကို အသုံးပြု၍ လေ့လာမှုတစ်ခုအရလောင်းကစားသူများနှင့်အရက်သမားများသည်တားစီးမှု၊ သိမြင်မှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုနှင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများ၌စွမ်းဆောင်ရည်လျော့နည်းကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အုပ်ချုပ်မှုလည်ပတ်မှု (41).
ဘုံ Neurobiological လုပ်ငန်းစဉ်
ကြီးထွားလာသောစာပေ၏ခန္ဓာကိုယ်သည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများ (ဥပမာ - serotonergic, dopaminergic, noradrenergic, opioidergic) တွင် neurotransmitter systems မျိုးစုံရှိသည်။42) ။ အထူးသဖြင့် serotonin (5-HT) သည်အပြုအမူအားတားဆီးခြင်းနှင့်အတူပါ ၀ င်သည့်လေ့လာမှု၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှု၏လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ပါ ၀ င်သည့် dopamine သည်ရောဂါနှစ်ခုလုံးအတွက်သိသိသာသာအထောက်အကူပြုနိုင်သည် (42,43).
အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများအတွက် serotonergic ပါဝင်မှုအတွက်သက်သေအထောက်အထားများသည် platelet monoamine oxidase B (MAO-B) လှုပ်ရှားမှု၏လေ့လာမှုများမှထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ (5-HIAA, metabolite) ၏ 5-HT) နှင့် 5-HT function ကိုတစ်ခုရံအမှတ်အသားစဉ်းစားသည်။ CSF 5-HIAA အဆင့်များသည်မြင့်မားသောစိတ်မသက်မသာဖြစ်စေခြင်းနှင့်အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေပြီးရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများတွင်တွေ့ရသည် (44) ။ serotonergic မူးယစ်ဆေးဝါးများအုပ်ချုပ်ပြီးနောက်ဟော်မုန်းတုံ့ပြန်မှုကိုတိုင်းတာသောဆေးဝါးဗေဒဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုလေ့လာမှုများသည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများအတွက် serotonergic ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုသက်သေပြသည် (45).
၀ တ္ထုများကိုထပ်ခါတလဲလဲအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်အပြုအမူဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုတွင်ပါ ၀ င်မှုသည်တပေါင်းတစည်းတည်းဖြစ်စဉ်ကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည်။ Preclinical နှင့်လက်တွေ့လေ့လာမှုများကလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောရောဂါများအတွက်နောက်ခံဇီဝဗေဒယန္တရားသည် ventral tegmental /ရိယာ၊46,47) ။ အဆိုပါ ventral tegmental areaရိယာနျူကလိယ accumbens နှင့် orbital တိုကျရိုကျ cortex မှ dopamine လွှတ်ပေးရန်အာရုံခံပါရှိသည်။ dopaminergic လမ်းကြောင်းများသို့ပြောင်းလဲခြင်းသည် dopamine ကိုထုတ်လွှတ်ပြီးစိတ်ကျေနပ်မှုခံစားရစေသည့်ဆုလာဘ်များ (လောင်းကစားခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးများ) ကိုရှာဖွေခြင်းကိုအခြေခံသည်။48).
neuroimaging လေ့လာမှုများမှအကန့်အသတ်ရှိသောအထောက်အထားသည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများကိုမျှဝေခြင်း၏ neurocircuitry ကိုအထောက်အပံ့ပြုသည် (7) ။ ventral medial prefrontal cortex (vmPFC) ၏လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းလာခြင်းသည်စွန့်စားရမှုနှင့်ဆုလာဘ်အကဲဖြတ်မှုများတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားများအတွက်လောင်းကစားကိုတုံ့ပြန်မှုလျော့နည်းလာခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။49) ။ အလားတူစွာပုံမှန်မဟုတ်သော vmPFC ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပစ္စည်းဥစ္စာသုံးစွဲမှုရောဂါရှိသူများတွင်တွေ့ရသည် (50) ။ အင်တာနက်ဂိမ်းကစားသူများအတွက်ဂိမ်း cue-ဆက်စပ် ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုသည်အတူတူပင် ဦး နှောက်ဒေသများ (orbitofrontal, dorsolateral prefrontal, anterior cingulate, nucleus accumbens) တွင်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်စပ်သည့် ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်စေခြင်းနှင့်အတူတူဖြစ်သည် (၅၁; Weinstein နှင့် Lejoyeux ကိုလည်းကြည့်ပါ။ ) ) ။
ဦး နှောက်ပုံရိပ်သုတေသနကအကြံပြုသည် ventral tegmental fromရိယာမှနျူကလိယ accumbens အထိ dopaminergic mesolimbic လမ်းကြောင်းသည်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းမမှန်ခြင်းနှင့်လောင်းကစားလောင်းခြင်းများတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်ဟုအကြံပြုထားသည်။ လောင်းကစားလောင်းကစားတွင်ပါဝင်သောဘာသာရပ်များသည်ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များထက်လောင်းကစားလောင်းကစားကိုလုပ်ဆောင်နေစဉ် fMRI နှင့်အတူ ventral striatal neuronal လုပ်ဆောင်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။52), ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ် processing သည့်အခါအရက် - မှီခိုဘာသာရပ်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိချက်ဆင်တူ (53) ။ လျော့နည်းသွား ventral ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း activation ကိုလည်းပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အမူအကျင့်စွဲနှင့်ဆက်စပ်တပ်မက်ခြင်း၌ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်41) ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါ (PD) နှင့်တစ် ဦး ချင်းရှိ ventral striatum တွင်လောင်းကစားခြင်းလုပ်ငန်းတွင်ပါ ၀ င်မှုသည် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် PD တစ်ခုတည်းရှိသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းမှပေါ်ပေါက်လာသည်။54), မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်စပ်တွေကိုများကထုတ်ယူအလားတူတုံ့ပြန်မှု (55).
အမူအကျင့်စွဲချက်များတွင် Dopamine ပါဝင်မှုကိုဆေးသောက်သည့် PD လူနာများ၏လေ့လာမှုများကအကြံပြုထားသည်။56,57) ။ PD နှင့်အတူလူနာများ၏လေ့လာမှုနှစ်ခုက 6% ကျော်သည် dopamine agonist ဆေးများသောက်သုံးသူများအကြားသိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားသောနှုန်းထားများနှင့်အတူ (ဥပမာ, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း, လိင်စွဲ) စတင်ခြင်းအပြုအမူစွဲသို့မဟုတ်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအသစ်တစ်ခုကိုကြုံတွေ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့58,59) ။ ပိုမိုမြင့်မားသော levo-dopa ဆေးပမာဏနှင့်ညီမျှမှုသည်အမူအကျင့်စွဲမှုရှိခြင်းနှင့်ပိုမိုဆက်စပ်သည်။59) ။ dopamine ပါဝင်မှုမှမျှော်လင့်ထားနိုင်သည့်အရာနှင့်ဆန့်ကျင်။ dopamine D2 / D3 receptors ရှိရန်ဘက်များကလောင်းကစားခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လှုံ့ဆော်မှုနှင့် PD မဟုတ်သူများအတွက်လောင်းကစားခြင်းနှင့်အပြုအမူများတိုးမြှင့်သည် (60) နှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏ကုသမှုကိုအဘယ်သူမျှမထိရောက်မှုရှိသည် (61,62) ။ ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့်အခြားအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများတွင် dopamine ၏အခန်းကဏ္ifyကိုရှင်းလင်းရန်နောက်ထပ်သုတေသနပြုရန်လိုအပ်သည်။
အပြုအမူစွဲလမ်းမှု၏မိသားစုသမိုင်း / မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာလေ့လာမှုအနည်းငယ်ကိုသင့်လျော်သောထိန်းချုပ်အုပ်စုများဖြင့်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည်။7) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်အတူ probands ၏သေးငယ်တဲ့မိသားစုလေ့လာမှုများ (63) kleptomania (64), သို့မဟုတ်မသင်မနေရဝယ် (65) အသီးအသီးတို့သည် probands ၏ပထမ ဦး ဆုံးဒီဂရီဆွေမျိုးသားချင်းများထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များလုပ်ခဲ့တယ်ထက်အရက်နှင့်အခြားပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုရောဂါနှင့်စိတ်ကျရောဂါနှင့်အခြားစိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါ၏သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားတစ်သက်တာနှုန်းရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားထိန်းချုပ်ထားမိသားစုလေ့လာမှုများအမူအကျင့်စွဲမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရောဂါများနှင့်မျိုးရိုးဗီဇဆက်နွယ်မှုရှိနိုင်သည်ဟူသောအမြင်ကိုထောက်ခံသည်။
တိကျသောအပြုအမူများနှင့်ရောဂါများအတွက်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများသည်၎င်းတို့၏ညီညွတ်မှု (monozygotic) နှင့်အဖွဲ့များ (dizygotic) အမွှာအတွဲများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ ဗီယက်နမ်ခေတ်အမွှာမှတ်ပုံတင်ကိုအသုံးပြုပြီးအမျိုးသားအမွှာအမွှာများကိုလေ့လာမှုတွင်ရောဂါရှာဖွေခြင်းအတွက်မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲမှု၏ ၁၂% မှ ၂၀% နှင့်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအတွက်လောင်းကစားခြင်းအတွက်အန္တရာယ်မရှိသောပတ် ၀ န်းကျင်ကွဲပြားမှု ၃ မှ ၈ ရာခိုင်နှုန်းသည်အရက်အတွက်အန္တရာယ်ရှိသည်ဟုမှတ်ယူသည်။ ရောဂါများကိုသုံးသည် (66) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်အရက်သုံးစွဲမှုရောဂါများအကြားပူးတွဲဖြစ်ပျက်မှု၏သုံးပုံနှစ်ပုံ (၆၄%) သည်ရောဂါနှစ်ခုလုံးကိုသြဇာသက်ရောက်သည့်မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်ဖြစ်ပြီးအခြေအနေနှစ်ခုလုံး၏မျိုးရိုးဗီဇမှတဆင့်ကူးစက်မှုကိုထပ်တူကျသည်ဟုအကြံပြုသည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များသည်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်ဘုံမျိုးရိုးဗီဇအထောက်အပံ့များကိုအကြံပြုသူများနှင့်ဆင်တူသည် (67).
အမူအကျင့်စွဲမှု၏မော်လီကျူးမျိုးရိုးဗီဇလေ့လာမှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။ D2 dopamine receptor gene (DRD1) ၏ D2A2 allele သည်ပြgambနာမရှိသောလောင်းကစားခြင်းနှင့်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့်ပူးတွဲဖြစ်ပေါ်နေသောရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာရောဂါများအကြိမ်ရေတိုးပွားလာခြင်း (68) ။ အများအပြားသော DRD2 မျိုးဗီဇတစ်ခုတည်းဘေ့ polymorphic (SNPs) impulsivity ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအစီအမံများနှင့်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်အမူအကျင့်တားစီး၏စမ်းသပ်အစီအမံနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် (69), ဒါပေမယ့်ဒီအမူအကျင့်စွဲနှင့်အတူလူများအတွက်အကဲဖြတ်ကြပြီမဟုတ်။ အလွန်အကျွံအသုံးပြုသောအင်တာနက်သုံးစွဲသူများသည်ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများထက် serotonin transporter gene (5HTTLPR) ၏ long-arm allele (SS) ၏ကြိမ်နှုန်းပိုမိုမြင့်မားသောကြောင့်၎င်းသည်အန္တရာယ်ပိုမိုများပြားခြင်းကိုရှောင်ရှားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် (၇၀; ဤပြissueနာကို Weinstein နှင့် Lejoyeux ကိုလည်းကြည့်ပါ) ။
အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးနှင့်ဆေးဝါးဗေဒနှစ်ခုလုံးအားအတူတူကုသမှုများကိုအပြုသဘောဖြင့်တုံ့ပြန်လေ့ရှိသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးလောင်းကစားခြင်း၊ အတင်းအကျပ်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ kleptomania၊ အရေပြားရှာဖွေခြင်းနှင့်မဝယ်မဝယ်ခြင်းများကိုကုသရန်အသုံးပြုသောအဆင့် ၁၂ ဆင့်ပါ Self-help ချဉ်းကပ်မှုများ၊71-74) ။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးအရ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုများသည်အလွဲသုံးစားမှုပုံစံများကိုဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အန္တရာယ်မြင့်မားသောအခြေအနေများကိုရှောင်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအပြုအမူများကိုအားဖြည့်စေသောလူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ရှောင်ကြဉ်ခြင်းကိုအားပေးသောပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာကွယ်ရေးပုံစံကိုမှီခိုလေ့ရှိသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်, obsessive- compulsive ရောဂါအဘို့အအောင်မြင်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုထိတွေ့မှုနှင့်တုန့်ပြန်ကာကွယ်တားဆီးရေးမဟာဗျူဟာများအလေးပေး (2).
အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုကိုကုသရန်ဆေးဝါးများယခုလက်ရှိတွင်မရှိသေးပါ၊ သို့သော်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများကိုကုသရန်ဂတိပြုခဲ့သည့်ဆေးဝါးများသည်လည်းအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုကိုကုသရန်ကတိကဝတ်ကိုပြသခဲ့သည် (75) ။ Naltrexone သည် mu-opioid receptor antagonist ဖြစ်ပြီးအရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုမှုကိုကုသရန်ယူအက်စ်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲရေးမှအတည်ပြုပြီးရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းနှင့် kleptomania ကိုကုသရန်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင်ထိရောက်မှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။76-79) နှင့် compulsive ဝယ်၏ထိန်းချုပ်မှုမရှိလေ့လာမှုများအတွက်ကတိပေး (80), မသင်မနေရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (81), အင်တာနက်စွဲလမ်း (82) နှင့်ရောဂါဗေဒအရေပြားကောက်နေ (83) ။ ဤတွေ့ရှိချက်များအရမူ mu-opioid receptors များသည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများတွင်ပါ ၀ င်သည့်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါများတွင်အလားတူအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်ကြောင်း၊ ဆနျ့ကငျြ, တိုတောင်းသော - သရုပ်ဆောင် mu-opioid အဲဒီ receptor ရန် naloxone obsessive-compulsive ရောဂါလက္ခဏာတွေပိုမိုဆိုးရွားစေ (84).
glutamatergic လှုပ်ရှားမှုကိုပြောင်းလဲစေသည့်ဆေးများသည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆေးစွဲမှုနှစ်ခုလုံးကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။ Topiramate သည် AMPA အမျိုးအစားခွဲခြားထားသည့် glutamate receptor (အခြားလုပ်ဆောင်မှုများအကြား) ကိုပိတ်ဆို့ထားသော anti-convulsant သည်ပွင့်လင်းမြင်သာသောလောင်းကစားခြင်း၊ မဝယ်မဝယ်ခြင်းနှင့်အရေပြားပေါက်ခြင်းများကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလေ့လာခြင်းအတွက်ကတိပေးခဲ့သည် (85), အရက်လျှော့ချအတွက်ထိရောက်မှု (86), စီးကရက် (87), နှင့်ကိုကင်း (88) ကိုအသုံးပြုပါ။ N-acetyl cysteine၊ အမိုင်နိုအက်ဆစ်သည်နျူးကလီးယပ်စ်တွင် extracellular glutamate အာရုံစူးစိုက်မှုကိုပြန်လည်ထူထောင်ပေးသည်။89) နှင့်ကိုကင်းတဏှာကိုလျော့နည်းစေသည် (90) နှင့်ကိုကင်းအသုံးပြုမှု (91) ကိုကင်းစွဲ၌တည်၏။ ဤလေ့လာမှုများကနျူကလိယ accumbens အတွက် dopaminergic သေံ၏ glutamatergic မော်ဂျူအမူအကျင့်စွဲခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုရောဂါများအတွက်ဘုံယန္တရားဖြစ်နိုင်သည် (အကြံပြု)92).
တစ် ဦး တည်းသာအမူအကျင့်စွဲ, ရောဂါဗေဒလောင်းကစား, DSM-IV နှင့် ICD-10 အတွက်အသိအမှတ်ပြုရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ရောဂါရှာဖွေရေးစံသတ်မှတ်ချက်များသည်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု / မှီခိုမှုတို့နှင့်တူသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအပြုအမူကိုပိုမိုအာရုံစူးစိုက်စေခြင်း၊ အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းလျော့နည်းလာခြင်း၊ သည်းခံနိုင်ခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးအကျိုးဆက်များ။ DSM-V Task Force မှရောဂါဗေဒလောင်းကစားကိုလက်ရှိစိတ်ဓာတ်ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမှမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများအပါအ ၀ င်“ စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများ” ဟုခေါ်ဝေါ်ထားသောအမျိုးအစားအသစ်သို့ပြောင်းလဲရန်အကြံပြုခဲ့သည်။www.dsm5.org, ဖေဖော်ဝါရီလ 10, 2010 ဝင်ရောက်) ။ အများအားဖြင့်သိသာထင်ရှားသည့်စံသတ်မှတ်ချက်အပြောင်းအလဲသည်လောင်းကစား ၀ င်ငွေအတွက်တရားမ ၀ င်လုပ်ရပ်များကျူးလွန်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတ်မှတ်ချက်ကျဆင်းခြင်းဖြစ်သည်။
အခြားအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုသည် ၀ ယ်ယူခြင်းအပါအ ၀ င်ရောဂါရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာစံနှုန်းများကိုအဆိုပြုထားသည်။93), အင်တာနက်စွဲ (94) ဗီဒီယို / ကွန်ပျူတာဂိမ်းစွဲ (95), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ (96) နှင့်အလွန်အကျွံ tanning (Kouroush et al ကိုကြည့်ပါ။ , ဒီပြissueနာ) ။ ဤအရာများသည်များသောအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုသို့မဟုတ်မှီခိုမှုအတွက် DSM-IV စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံသည်။ ဥပမာအမူအကျင့်တွင်အချိန်အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း၊ အမူအကျင့်ကိုလျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ်ရပ်တန့်ရန်မအောင်မြင်သည့်ကြိုးပမ်းမှုများ၊ အပြုအမူအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုလျော့နည်းလာခြင်း၊ အကျိုးဆက်များ။ DSM-V ပစ္စည်းနှင့်သက်ဆိုင်သောမမှန်မှုများအလုပ်အဖွဲ့သည် DSM-V တွင်ပါ ၀ င်ရန်အတွက်ဤအရာ ၀ တ္ထုမဟုတ်သည့်စွဲလမ်းမှုအချို့ကိုစဉ်းစားနေသည်။ အထူးသဖြင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုကိုဖော်ပြသည် (www.dsm5.org; ဖေဖော်ဝါရီလ 10, 2010 ဝင်ရောက်) ။ သို့သော်ရောဂါများစွာအတွက်ဤရောဂါရှာဖွေသတ်မှတ်ချက်အတွက်ခိုင်လုံသောအချက်အလက်များမှာအနည်းငယ်သာရှိသည်သို့မဟုတ်လုံးဝမရှိသလောက်ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်လက်ရှိပြtheနာ၏ပျံ့နှံ့မှုကိုခန့်မှန်းရန်စစ်တမ်းကိရိယာများအနေဖြင့်အများဆုံးအသုံးဝင်သည်။
စာပေတွင်တင်ပြသောရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဆိုင်ရာမေးခွန်းတစ်ခုမှာအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှု (နှင့်ဆေးစွဲမှုများ) သည်စိတ်မသက်မသာဖြစ်မှု - လှုံ့ဆော်မှုအတိုင်းအတာအပေါ်ကျရောက်သည့်နေရာဖြစ်သည် (97), ဆိုလိုသည်မှာ, သူတို့ကပိုပြီးဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်သို့မဟုတ် obsessive compulsive မမှန်နဲ့တူပါသလား အချို့ကဤတစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်းရှုထောင့်ချဉ်းကပ်ပုံသည်အလွန်ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး impulsivity နှင့် compulsivity တို့သည်ရှုထောင့်တစ်ခုတည်း၏ဆန့်ကျင်ဘက်တိုင်များထက် orthogonal dimension ကိုကိုယ်စားပြုသည်ဟုဆိုကြသည်။98) ။ အငြင်းပွားဖွယ်ရာအငြင်းပွားမှုနှင့်ကိုက်ညီမှုအနေဖြင့်အပြုအမူဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုရှိသည့်လူများအကြားစိတ်မသက်မသာဖြစ်စေမှု၏သိသိသာသာကွာခြားမှု၊ ဆေးဝါးဆိုင်ရာကုသမှုကိုတုန့်ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည့်တွေ့ရှိချက်များဖြစ်သည် (48, 99).
DSM-IV တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲခြင်း (ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုပြordersနာများ) သည်သီးခြားလွတ်လပ်သောအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသည်ဥပမာအားဖြင့်၊ pyromania နှင့် kleptomania နှင့်ဆင်တူသည်။ ICD-10 သည်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းကို“ အလေ့အထနှင့်အငြင်းပွားဖွယ်ရာ” ရောဂါဟုခွဲခြားသတ်မှတ်သည်၊ သို့သော်“ တစ်ခါတစ်ရံတွင်“ အတင်းအကျပ်လောင်းကစားခြင်း” ဟုခေါ်ဝေါ်သော်လည်း“ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအရအပြုအမူသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်” ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်
ဆက်စပ်သောပြissueနာတစ်ခုသည်ကွဲပြားခြားနားသောအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကြားတွင်ပေါင်းစည်းခြင်းဖြစ်သည်။ မူလတန်း obsessive compulsive ရောဂါနှင့်အတူလူနာ 210 အတွက်လူ ဦး ရေနှင့်လက်တွေ့ variable တွေကိုတစ်စပျစ်သီးပြွတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပြုအမူစွဲနှင့်အတူလူနာနှစ်ခုသီးခြားပြွတ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည် (100): ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသို့မဟုတ်လိင်စွဲ ("hypersexuality") နှင့်အတူလူနာမဖြစ်မနေစျေးဝယ်နှင့်အတူလူနာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက, ပိုမိုအစောပိုင်းအသက်အရွယ်စတင်ခဲ့ခြင်းနှင့်အထီးပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏။ ဒီရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုအတည်ပြုရန်နှင့်တိုးချဲ့ရန်နောက်ထပ်သုတေသနလိုအပ်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (သိမြင်မှု) နှင့်အပြုအမူနှစ်ခုစလုံးတွင် impulsivity နှင့် compulsivity ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအရအမျိုးမျိုးသောအပြုအမူနှင့်ပစ္စည်းစွဲလမ်းမှုရှိသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ကြီးမားသောသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောပြီးကောင်းမွန်သောသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုပြည့်စုံစွာအကဲဖြတ်လိမ့်မည်။ မော်တာ) domains များ, ဥပမာ, နှောင့်နှေး (ဆုလာဘ်၏ယာယီလျှော့ချ) ကိုထိခိုက်မခံ, အန္တရာယ် - ဆုလာဘ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ, အယူအဆရေးရာတင်းကျပ်, အချိန်မတန်မီမျှော်လင့်တုံ့ပြန်, သည်းခံစိတ်တုံ့ပြန်, တုံ့ပြန်မှုတားစီးနှင့်ပြောင်းပြန်သင်ယူမှု။
ကြီးထွားလာသည့်အထောက်အထားများအရအမူအကျင့်စွဲမှုသည်သဘာဝသမိုင်းကြောင်း (များစွာသောဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူငယ်များတွင်ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းနှင့်ပျံ့နှံ့မှုနှင့်အတူနာတာရှည်၊ ပြန်လည်သက်ဆိုင်သောသင်တန်း)၊ ဖြစ်ရပ်များ (ပုဂ္ဂလဒိc္လိုချင်တပ်မက်မှု၊ , comorbidity, ထပ်တူမျိုးဗီဇအလှူငွေ, neurobiological ယန္တရားများ (ဦး နှောက် glutamatergic, opioidergic, serotonergic နှင့် dopamine mesolimbic စနစ်များအတွက်အခန်းကဏ္ with နှင့်အတူ) နှင့်ကုသမှုတုံ့ပြန်မှု။ သို့သော်တည်ဆဲဒေတာသည်ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းအတွက်အကျယ်ပြန့်ဆုံးဖြစ်သည် (Wareham နှင့် Potenza၊ ဤပြseeနာကိုကြည့်ပါ)၊ မဖြစ်မနေဝယ်ယူရန်အတွက်ကန့်သတ်ထားသောအချက်အလက်များ (Lejoyeaux နှင့် Weinstein၊ ဤပြseeနာကိုကြည့်ပါ)၊ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု (Weinstein နှင့် Lejoyeaux၊ ဤပြissueနာကိုကြည့်ပါ) နှင့် ဗီဒီယို / ကွန်ပျူတာဂိမ်းစွဲခြင်း (Weinstein၊ ဤပြseeနာကိုကြည့်ပါ) နှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုကဲ့သို့သောအခြားအပြုအမူဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုအတွက်အချက်အလက်များလုံးဝနီးပါးမရှိ (Garcia and Thibaut၊ ဤပြseeနာကိုကြည့်ပါ)၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာစွဲခြင်း (Reynaud၊ ဤပြseeနာကိုကြည့်ပါ)၊ Odlaug နှင့် Grant၊ ဤပြissueနာ) သို့မဟုတ်အလွန်အကျွံ tanning (Kouroush et al ။ ၊ ဤပြseeနာကိုကြည့်ပါ) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းကိုပစ္စည်းမဟုတ်သောသို့မဟုတ်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုဟုသတ်မှတ်ရန်လုံလောက်သောသက်သေအထောက်အထားရှိသည်။ DSM-V Task Force သည် DSM-V တွင်အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းမှစိတ်ကြွထိန်းချုပ်မှုရောဂါမှစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများ (ပစ္စည်းအသစ်နှင့်ပစ္စည်းနှင့်မဆိုင်သောစွဲလမ်းမှုများပါ ၀ င်သည့်အမျိုးအစားအသစ်) သို့ပြောင်းရန်အဆိုပြုထားသည်။ အထူးသဖြင့်ခိုင်လုံသောအတည်ပြုရောဂါရှာဖွေသည့်စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အလားအလာရှိသော၊ longitudinal လေ့လာမှုများမရှိခြင်းသည်အခြားသောအပြုအမူစွဲလမ်းမှုများကိုပြည့်စုံကောင်းမွန်သောလွတ်လပ်သောရောဂါများအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်အချိန်မတန်သေးဘဲ၎င်းတို့အားအရာဝတ္ထုစွဲလမ်းမှုနှင့်တူသောစိတ်အားထက်သန်မှုထိန်းချုပ်မှုရောဂါများအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည်အချိန်မတန်သေးပါ။ လူသားနှင့်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအပါအ ၀ င်သိသာထင်ရှားသောအနာဂတ်သုတေသန (101အထူးသဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇ၊ neurobiology (ဦး နှောက်ပုံရိပ်အပါအ ၀ င်) နယ်ပယ်များတွင်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုအသိပညာကိုပစ္စည်းစွဲလမ်းမှုအဆင့်အထိရောက်စေရန်လိုအပ်သည်။
အသားအရောင်ခွဲခြားသုတေသနအစီအစဉ်၊ အမျိုးသားအင်စတီကျု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာအမျိုးသားအင်စတီကျု၊ NIH (NIDA) သည် R01 DA019139 (MNP) နှင့် RC1 DA028279 (JEG)၊ နှင့်တာဝန်ရှိဂိမ်းများအတွက်အမျိုးသားစင်တာနှင့်လောင်းကစားဆိုင်ရာရောဂါများဆိုင်ရာသုတေသနဌာနမှအထောက်အပံ့ပေးသောလောင်းကစားသုတေသနတွင်မင်နီဆိုတာနှင့်ယေးလ်ဆိုင်ရာထူးချွန်သည့်စင်တာများဖြစ်သည်။ Dr. Weinstein ကို Psychobiology ဆိုင်ရာအစ္စရေးအမျိုးသားအင်စတီကျုကထောက်ပံ့သည်။ လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်သည့်စာမူပါအကြောင်းအရာများသည်စာရေးသူများ၏တာဝန်သာဖြစ်ပြီး၊ တာဝန်ရှိသည့်ကစားနည်းများအတွက်အမျိုးသားစင်တာ (သို့) လောင်းကစားမသန်မစွမ်းမှုဆိုင်ရာသုတေသနဌာနသို့မဟုတ်အခြားရန်ပုံငွေအေဂျင်စီများ၏တရားဝင်အမြင်များကိုသေချာပေါက်မဖော်ပြပါ။
စာရေးသူထုတ်ဖော်ဖြေ - စာရေးသူအားလုံးကဒီစာတမ်းပါအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ် ၀ င်စားမှုပconflictိပက္ခမရှိခဲ့ဘူး။ ဒေါက်တာ Grant သည် NIMH၊ NIDA၊ တာဝန်ရှိကစားကွင်းဆိုင်ရာအမျိုးသားစင်တာနှင့်လောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာရောဂါဆိုင်ရာသုတေသနဌာနနှင့်သစ်တောဆေးဝါးများမှသုတေသနထောက်ပံ့မှုများရရှိခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Grant သည်လောင်းကစားလေ့လာရေးဂျာနယ်၏အယ်ဒီတာချုပ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် Springer Publishing မှနှစ်စဉ်လျော်ကြေးငွေရရှိခဲ့ပြီး NIH နှင့် Ontario လောင်းကစားအသင်းအတွက်ထောက်ပံ့ငွေပြန်လည်သုံးသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Oxford University Press မှအမေရိကန်စိတ်ရောဂါထုတ်ဝေရေးမှချီးမြှင့်ငွေကိုရရှိခဲ့သည်။ , Norton Press နှင့် McGraw Hill တို့သည် Indiana တက္ကသိုလ်ဆေးကျောင်း၊ တောင်ဖလော်ရီဒါတက္ကသိုလ်၊ Mayo ဆေးကျောင်း၊ California ဆေးစွဲဆေးပညာအသင်း၊ Arizona ပြည်နယ်မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်၊ အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်၊ Nova Scotia ၏ပြည်နယ်နှင့် Alberta ပြည်နယ်။ ဒေါက်တာ Grant သည်လှုံ့ဆော်မှုထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာပြordersနာများနှင့်ပတ်သက်သောဥပဒေရုံးများအတွက်အတိုင်ပင်ခံအဖြစ်လျော်ကြေးငွေရရှိခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Potenza သည်အောက်ပါတို့အတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုသို့မဟုတ်လျော်ကြေးငွေရရှိခဲ့သည် - Boehringer Ingelheim အတွက်အကြံပေးနှင့်အကြံပေး၊ Somaxon ရှိဘဏ္interestsာရေးအကျိုးစီးပွား၊ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဌာန၊ စစ်ပြန်ရေး ဦး စီးဌာန၊ Mohegan Sun Casino၊ တာဝန်ရှိကစားကွင်းဆိုင်ရာအမျိုးသားစင်တာနှင့်လောင်းကစားမသန်စွမ်းမှုသုတေသနသုတေသနဌာနနှင့်သစ်တောဓာတ်ခွဲခန်းများမှသုတေသနအထောက်အပံ့၊ မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း၊ လှုံ့ဆော်မှုထိန်းချုပ်ခြင်းမမှန်ခြင်းများသို့မဟုတ်အခြားကျန်းမာရေးအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်သောစစ်တမ်းများ၊ စာပို့ခြင်းသို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းဖြင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းများတွင်ပါ ၀ င်သည်။ စွဲလမ်းမှုသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုထိန်းချုပ်မှုမမှန်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စရပ်များအတွက်ဥပဒေရုံးများအတွက်တိုင်ပင်ခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်စွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများပြConnectနာလောင်းကစား ၀ န်ဆောင်မှုအစီအစဉ်၏ Connecticut ဌာနတွင်လက်တွေ့ကုသမှုပေးခဲ့သည်။ စိတ်ကျန်းမာရေးစာသားထုတ်ဝေသူများအတွက်စာအုပ်များသို့မဟုတ်စာအုပ်အခန်းများကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Dr. Weinstein သည်အစ္စရေးမူးယစ်ဆေးဝါးနှိမ်နင်းရေးအာဏာပိုင်၊ အစ္စရေးအမျိုးသားစိတ်ပညာဆိုင်ရာသုတေသနဌာန၊ ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှသိပ္ပံပညာရှင်နှင့် Rashi Trust (ပါရီ၊ ပြင်သစ်) မှသုတေသနထောက်ပံ့မှုများနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းမှသင်ကြားပို့ချမှုအတွက်အခကြေးငွေများရရှိခဲ့သည်။ အစ္စရေးပညာရေးဝန်ကြီးဌာန။ ဒေါက်တာ Gorelick သည်ပြင်ပရန်ပုံငွေသို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာပconflictsိပက္ခများမရှိပါ။
1. Potenza MN ။ မမှန်သည် non-ပစ္စည်းဥစ္စာ-related အခြေအနေများပါဝင်သည် addictive သငျ့သလော စွဲလမ်း။ 2006;101 (ပျော့ပျောင်း 1): 142-151 ။ [PubMed]
2. Potenza MN, Koran LM, Pallanti S. Impulse-control disorders နှင့် obsessive-compulsive disorder: လက်ရှိနားလည်မှုနှင့်အနာဂတ်သုတေသနလမ်းညွှန်များ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2009;170(1): 22-31 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
3. အဆိုပြုထားသည့် DSM-V တွင် Holden C. အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှု သိပ္ပံ။ 2010;327: 935 ။ [PubMed]
4. American Psychiatric Association ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲ။ 4. Washington, DC: American Psychiatric Publishing, Inc; 2000 စာသားတည်းဖြတ်မူ (DSM-IV-TR)
5. Chambers RA, Potenza MN ။ Neurode ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, Impulse နှင့်ဆယ်ကျော်သက်လောင်းကစားခြင်း။ J ကို Gamble လုံး။ 2003;19(1): 53-84 ။ [PubMed]
6. Slutske WS ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်သဘာဝပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်ကုသမှု-ရှာကြံ: နှစ်ခုအတွက်အမေရိကန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးစစ်တမ်းများ၏ရလဒ်များကို။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006;163(2): 297-302 ။ [PubMed]
7. ဘရူဂျာ Potenza MN ။ ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ပုံမမှန်ခြင်း၏ neurobiology နှင့်မျိုးရိုးဗီဇ: မူးယစ်ဆေးစွဲလမ်းမှဆက်ဆံရေး။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး Pharmacol ။ 2008;75(1): 63-75 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
8. de Castro V, Fong T, Rosenthal RJ, Tavares အိပ်ချ်။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားများနှင့်အရက်သမားများအကြားစွဲလမ်းမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများနှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ 2007;32(8): 1555-1564 ။ [PubMed]
9. Blanco ကို C, Moreyra P, Nunes EV, Sáiz-Ruiz J, Ibáñezအေရောဂါဗေဒလောင်းကစား: စွဲသို့မဟုတ်အတင်းအကျပ်? seminal Clin Neuropsychiatry ။ 2001;6(3): 167-176 ။ [PubMed]
10 ။ je, ဘရူဂျာ Potenza MN ပေးသနား။ ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်း၏ neurobiology ။ CNS Spectr ။ 2006;11(12): 924-930 ။ [PubMed]
11 ။ Grant JE, Potenza MN ။ kleptomania အတွက်ကုသမှုရှာကြံတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ကျားနှင့်ဆက်စပ်သောကွဲပြားမှု CNS Spectr ။ 2008;13(3): 235-245 ။ [PubMed]
12 ။ Grant JE ကင်မ် SW ။ လူကြီး 131 ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း၏လူ ဦး ရေအချိုးအစားနှင့်လက်တွေ့လက္ခဏာများ။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001;62(12): 957-962 ။ [PubMed]
13 ။ Potenza MN, Steinberg MA, McLaughlin SD, Wu R, Rounsaville BJ, O'Malley SS ။ လောင်းကစားဟယ်လင်းကို သုံး၍ ပြproblemနာရှိသည့်လောင်းကစားသမားများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများတွင်ကျား - မကွဲပြားမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001;158(9): 1500-1505 ။ [PubMed]
14 ။ Brady KT, Randall CL ။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်အတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု။ စိတ်ရောဂါ Clin မြောက်မိပါတယ်။ 1999;22(2): 241-252 ။ [PubMed]
15 ။ Ledgerwood DM, Weinstock J, Morasco BJ, Petry NM ။ လက်တွေ့အင်္ဂါရပ်များနှင့်မကြာသေးမီကလောင်းကစားခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောတရားမဝင်အပြုအမူနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားများ၏ကုသမှုဟောကိန်း။ J ကို Am Acad စိတ်ရောဂါကုသမှုဥပဒေ။ 2007;35(3): 294-301 ။ [PubMed]
16 ။ Lejoyeux M, Tassain V, Solomon J, စိတ်ဓာတ်ကျလူနာများအားအတင်းအကျပ် ၀ ယ်ခြင်းအကြောင်းလေ့လာမှု။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1997;58(4): 169-173 ။ [PubMed]
17 ။ ကင်မ် SW, Grant က je ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားရောဂါနှင့် obsessive-compulsive ရောဂါအတွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအတိုင်းအတာ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2001;104(3): 205-212 ။ [PubMed]
18 ။ Grant JE ကင်မ် SW ။ kleptomania အတွက် temperament နှင့်အစောပိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှု။ Compr စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002;43(3): 223-228 ။ [PubMed]
19 ။ ရေမွန် NC, Coleman, E, Miner MH ။ စိတ်ရောဂါ comorbidity နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် compulsive / ထကြွလွယ်သောစရိုက်များ။ Compr စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003;44(5): 370-380 ။ [PubMed]
20 ။ ကယ်လီ TH, Robbins, G, မာတင်, CA, Fillmore MT, ယာဉ်ကြော SD, Harrington Ng, Rush CR ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအားနည်းချက်အတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု: D-စိတ်ကြွဆေးနှင့်အာရုံခံစားမှု-ရှာအခြေအနေ။ Psychopharmacology (Berl) 2006;189(1): 17-25 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
21 ။ Tavares H ကို, Gentil V. ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့် obsessive-compulsive ရောဂါ: လှူဒါန်းမှု၏ရောဂါတစ်ရောင်စဉ်ဆီသို့။ ဗြာဇီယာ Psiquiatr ။ 2007;29(2): 107-117 ။ [PubMed]
22 ။ Blanco C၊ Potenza MN၊ Kim SW, Ibáñez A၊ Zaninelli R, Saiz-Ruiz J, Grant JE ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်ထကြွလွယ်သောနှင့် compulsivity ၏ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2009;167(1-2): 161-168 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
23 ။ Chamberlain SR, Fineberg NA, Blackwell အေဒီ၊ Robbins TW, Sahakian BJ မော်တာတားစီးနှင့် obsessive-compulsive ရောဂါနှင့် trichotillomania အတွက်သိမြင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006;163(7): 1282-1284 ။ [PubMed]
24 ။ Odlaug BL, Grant က je, Chamberlain SR ။ မော်တာတားစီးနှင့်ရောဂါဗေဒအသားအရေကောက်ယူအတွက်သိမြင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ Prog Neuropharm Biol စိတ်။ 2009 နိုဝင်ဘာ 13; [EPub ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏]
25 ။ Cunningham-Williams က RM, Cottler LB, Compton WM, 3rd, Spitznagel EL ။ အခွင့်အလမ်းတွေကိုယူပြီး - လောင်းကစားသမားတွေပြlersနာနဲ့စိတ်ရောဂါ - စိန့်လူးဝစ္စကူးစက်ရောဂါဖမ်းမိAreaရိယာလေ့လာမှုမှရလာဒ်များ။ J ကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဖြစ်၏။ 1998;88(7): 1093-1096 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
26 ။ Petry NM, Stinson FS, Grant BF DSM-IV ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်အခြားစိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါများကိုတိုက်ကျွေးခြင်း - အရက်နှင့်ဆက်စပ်သောအခြေအနေများဆိုင်ရာအမျိုးသားကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာစစ်တမ်းမှရလဒ်များ။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005;66(5): 564-574 ။ [PubMed]
27 ။ Edmonton ရှိရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်း၏ Bland RC၊ Newman SC၊ Orn H၊ Stebelsky G. ကူးစက်ရောဂါ။ J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှုနိုင်သလား။ 1993;38(2): 108-112 ။ [PubMed]
28 ။ El-Guebaly N၊ Patten SB၊ Currie S၊ ဝီလျံဖက်စပ်လုပ်ငန်း၊ Beck CA၊ Maxwell CJ, Wang JL ။ လောင်းကစားအပြုအမူ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်စိတ်နေစိတ်ထားနှင့်စိုးရိမ်စိတ်မမှန်မှုများအကြားကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုများ။ J ကို Gamble လုံး။ 2006;22(3): 275-287 ။ [PubMed]
29 ။ Welte JW၊ Barnes GM၊ Tidwell MC, Hoffman JH ။ အမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူငယ်များအကြားလောင်းကစားခြင်းပြproblemနာသည်အမျိုးသားစစ်တမ်းမှရလဒ်ဖြစ်သည်။ J ကို Gamble လုံး။ 2008;24(2): 119-133 ။ [PubMed]
30 ။ ယန်း JY, Ko CH, ယန်း CF, Chen က CS, Chen က CC ကို။ ကောလိပ်ကျောင်းသားတို့တွင်အအန္တရာယ်ရှိသောအရက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းအကြားအသင်းအဖွဲ့: ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏နှိုင်းယှဉ်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Clin neuroscience ။ 2009;63(2): 218-24 ။ [PubMed]
31 ။ Stinchfield R, Kushner MG, Winters KC ။ လောင်းကစားပြproblemနာ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်လောင်းကစားကုသမှုရလဒ်နှင့် ပတ်သက်၍ အရက်သောက်သုံးခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာကြိုတင်ကုသမှု။ J ကို Gamble လုံး။ 2005;21(3): 273-297 ။ [PubMed]
32 ။ Duhig AM, Maciejewski PK, Desai RA, Krishnan-Sarin S, Potenza MN အရက်သောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အတိတ်ကာလလောင်းကစားသမားများနှင့်မဟုတ်သောလောင်းကစားသမားများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ 2007;32(1): 80-89 ။ [PubMed]
33 ။ Grant JE, Potenza MN ။ ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း။ အမ်း Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005;17(4): 237-241 ။ [PubMed]
34 ။ Potenza MN, Steinberg MA, McLaughlin SD, Wu R, Rounsaville BJ, Krishnan-Sarin S, George TP, O'Malley SS ။ လောင်းကစားလိပ်စာဟုခေါ်သည့်လောင်းကစားသမားများတွင်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းပြproblemနာ၏လက္ခဏာများ။ နံနက် J ကိုစွဲလမ်း။ 2004;13(5): 471-493 ။ [PubMed]
35 ။ Presta S, Marazziti D, Dell'Osso L, Pfanner C, Pallanti S, Cassano GB ။ Kleptomania: အီတလီနမူနာတစ်ခုတွင်လက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ Compr စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002;43(1): 7-12 ။ [PubMed]
36 ။ Di Nicola M, Tedeschi D, Mazza M, Martinotti G, Harnic D, Catalano V, Bruschi A, Pozzi, G, Bria P, Janiri L. L. စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါလူနာများအမူအကျင့်စွဲ - စိတ်မရှည်နိုင်မှုနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအတိုင်းအတာ။ J ကို disorders အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု။ 2010 ဇန်နဝါရီ 16;
37 ။ Petri မိုင်, လောင်းကစားဝိုင်းပြဿနာများကိုနှင့်အတူပစ္စည်းဥစ္စာချိုးဖောက်နှောင့်နှေးဆုလာဘ်၏ Casarella တီအလွန်အကျွံလျှော့စျေး။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 56(1): 25-32 ။ [PubMed]
38 ။ Bechara အေအန္တရာယ်များစီးပွားရေးလုပ်ငန်း: စိတ်လှုပ်ရှားမှု, ဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်စွဲလမ်း။ J ကို Gamble လုံး။ 2003;19(1): 23-51 ။ [PubMed]
39 ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားလူနာအတွက် Cavedini P ကို, Riboldi, G, Keller R ကို, D'Annucci တစ် ဦး, Bellodi အယ်လ် Frontal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေးကမောက်ကမဖြစ်မှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002;51(4): 334-341 ။ [PubMed]
40 ။ Ko CH၊ Hsiao S၊ Liu GC၊ Yen JU, Yang MJ, Yen CF. ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည့်အလားအလာနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းနေသောကောလိပ်ကျောင်းသားများ၏စရိုက်လက္ခဏာ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2010;175: 121-125 ။ [PubMed]
41 ။ Goudriaan AE၊ Oosterlaan J, de Beurs E၊ ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းတွင် van den Brink ဒဗလျူ Neurocognitive လုပ်ဆောင်ချက်များ - အရက်မှီခိုမှု၊ Tourette syndrome ရောဂါနှင့်ပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ စွဲလမ်း။ 2006;101(4): 534-547 ။ [PubMed]
42 ။ Potenza MN ။ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲခြင်း၏ neurobiology: ခြုံငုံသုံးသပ်နှင့်အသစ်တွေ့ရှိချက်များ။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2008;363(1507): 3181-3189 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
43 ။ Fineberg NA, Potenza MN, Chamberlain SR, Berlin HA, Menzies L, Bechara A၊ Sahakian BJ, Robbins TW, Bullmore ET, Hollander E. တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှ endophenotypes အထိ compulsive and impulsive အပြုအမူများ - ဇာတ်ကြောင်းသုံးသပ်ချက်။ Neuropsychopharmacology ။ 2010;35(3): 591-604 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
44 ။ Blanco C, Orensanz-Muñoz L, Blanco-Jerez C, Saiz-Ruiz J. ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းနှင့် MAO ၏လှုပ်ရှားမှု - စိတ်ပညာဆိုင်ရာလေ့လာမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1996;153(1): 119-121 ။ [PubMed]
45 ။ လူမှုရေး phobia အတွက် Hollander အီး, Kwon J ကို, Weiller က F, Cohen ကို L ကို, Stein DJ သမား, DeCaria ကို C, Liebowitz M က, Simeon D. Serotonergic function ကို: ပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် obsessive- compulsive ရောဂါဘာသာရပ်များ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 1998;79(3): 213-217 ။ [PubMed]
46 ။ Dagher A၊ Robbins TW ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, စွဲ, dopamine: ပါကင်ဆန်ရောဂါ၏ထိုးထွင်းသိမြင်မှု။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2009;61(4): 502-510 ။ [PubMed]
47 ။ O'Sullivan အက်စ်အက်စ်, အီဗန် AH, Lees AJ ။ Dopamine dysregulation syndrome ရောဂါ - ၎င်း၏ရောဂါဗေဒ, ယန္တရားများနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ CNS မူးယစ်ဆေးဝါး။ 2009;23(2): 157-170 ။ [PubMed]
48 ။ Zack M က, Poulos CX ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့် psychostimulant စွဲအတွက် dopamine များအတွက်စင်ပြိုင်အခန်းကဏ္။ ။ Curr မူးယစ်ဆေးဗျာအလွဲသုံးစားပြုမှု 2009;2(1): 11-25 ။ [PubMed]
49 ။ Potenza MN, Leung HC၊ Blumberg HP၊ Peterson BS, Fulbright RK, Lacadie CM, Skudlarski P, Gore JC ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက် ventromedial prefrontal cortical function ကိုတစ်ခု FMRI Stroop တာဝန်လေ့လာမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003;160(11): 1990-1994 ။ [PubMed]
50 ။ လန်ဒန် ED, Ernst M က, Grant က S နဲ့, Bonson K ကို Weinstein အေ Orbitofrontal cortex နှင့်လူ့မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု: အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်။ Cereb Cortex ။ 2000;10(3): 334-342 ။ [PubMed]
51 ။ ko CH, လျူ GC, Hsiao S က, ယန်း JY ယန် MJ, လင်း WC, ယန်း CF, Chen က CS ။ အွန်လိုင်းဂိမ်းစွဲလမ်း၏ဂိမ်းကစားတတ်ပြီးသူနဲ့ဆက်စပ်ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာ။ J ကိုစိတ်ရောဂါ Res ။ 2009;43(7): 739-747 ။ [PubMed]
52 ။ Reuter J, Raedler T, Rose M, Hand I, Gläscher J, Büchel C. ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသည် mesolimbic ဆုလာဘ်စနစ်၏သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုလျှော့ချခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ နတ် neuroscience ။ 2005;8(2): 147-148 ။ [PubMed]
53 ။ Wrase J, Schlagenhauf F, Kienast T, Wüstenberg T, Bermpohl F, Kahnt T, Beck A, Ströhle A, Juckel G, Knutson B, Heinz အေ။ ဆုချီးမြှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အလုပ်မဖြစ်ခြင်းသည် detoxified အရက်သမားများတွင်အရက်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ Neuroimage ။ 2007;35(2): 787-794 ။ [PubMed]
54 ။ Steeves TD၊ Miyasaki J၊ Zurowski M၊ Lang AE, Pellecchia G၊ Van Eimeren T, Rusjan P, Houle S, Strafella AP ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်အတူ Parkinsonian လူနာများတွင် striatal dopamine လွှတ်ပေးမှုတိုးမြှင့်: တစ် [11C] raclopride PET လေ့လာမှု။ ဦးနှောက်။ 2009;132(Pt 5): 1376-1385 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
55 ။ Bradberry CW ။ ကြွက်များ၊ မျောက်များနှင့်လူသားများတွင် cue ဆိုးကျိုးများကိုကိုကင်း sensitip နှင့် dopamine စေ့စပ်ဖြန်ဖြေခြင်း - သဘောတူညီချက်၊ သဘောမတူညီမှုများနှင့်စွဲလမ်းမှုအတွက်ဂယက်ရိုက်ခြင်း။ Psychopharmacology (Berl) 2007;191(3): 705-717 ။ [PubMed]
56 ။ Weintraub: D, Potenza MN ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါရှိ Impulse Control Disorders ။ Curr Neurol Neurosci ကိုယ်စားလှယ်။ 2006;6(4): 302-306 ။ [PubMed]
57 ။ Voon V၊ Fernagut PO, Wickens J၊ Baunez C, Rodriguez M, Pavon N, Juncos JL, Obeso JA, Bezard E. ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်နာတာရှည် dopaminergic စိတ်ကြွဆေး - dyskinesias မှထိန်းချုပ်သောရောဂါများအထိ။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet Neurol ။ 2009;8: 1140-1149 ။ [PubMed]
58 ။ Voon V၊ Hassan K၊ Zurowski M၊ de Souza M, Thomsen T, Fox S, Lang AE, Miyasaki J ။ အာရုံကြော။ 2006;67(7): 1254-1257 ။ [PubMed]
59 ။ Weintraub: D, Siderowf အေဒီ၊ Potenza MN၊ Goveas J, Morales KH, Duda JE, Moberg PJ, Stern MB ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် dopamine agonist ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ဆက်စပ်မှု။ Arch Neurol ။ 2006;63(7): 969-973 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
60 ။ Zack M က, Poulos CX ။ တစ်ဦးက D2 ရန်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအတွက်လောင်းကစားဝိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲ၏အကြိုးနှင့် priming သက်ရောက်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2007;32(8): 1678-1686 ။ [PubMed]
61 ။ Fong သည် T-, Kalechstein တစ်ဦးက, Bernhard B, Rosenthal R ကို, Rugle အယ်လ်ကိုဗီဒီယိုဖဲချပ်ဝေရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေ၏ကုသမှုများအတွက် olanzapine ၏တစ်ဦးကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2008;89(3): 298-303 ။ [PubMed]
62 ။ McElroy SL, နယ်လ်ဆင် EB, Welge JA, Kaehler L ကို, Keck PE, Jr Olanzapine ရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏ကုသမှု: တစ်အနုတ်လက္ခဏာကျပန်းရလဒ်များအရအိပ်ယာ -controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008;69(3): 433-440 ။ [PubMed]
63 ။ Black DW, Monahan PO, Temkit M, Shaw M. ရောဂါဗေဒလောင်းကစားအကြောင်းမိသားစုလေ့လာမှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2006;141(3): 295-303 ။ [PubMed]
64 ။ Grant JE ။ kleptomania နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်မိသားစုသမိုင်းနှင့်စိတ်ရောဂါ comorbidity ။ Compr စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003;44(6): 437-441 ။ [PubMed]
65 ။ Black DW, Repertinger S, Gaffney GR, Gabel J. မိသားစုသမိုင်းနှင့်မတည်မငြိမ်ဝယ်ယူသောသူများအတွက်စိတ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု။ ပဏာမတွေ့ရှိချက်များ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1998;155(7): 960-963 ။ [PubMed]
66 ။ Slutske WS, Eisen S က, စစ်မှန်သော WR, လီယွန် MJ, Goldberg က J ကို, အမျိုးသားများတွင်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်အရက်မှီခိုဘို့ Tsuang အမ်အဖြစ်များသည့်မျိုးဗီဇအားနည်းချက်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2000;57(7): 666-673 ။ [PubMed]
67 ။ Tsuang MT, Lyons MJ, Meyer JM, Doyle T, Eisen SA, Goldberg J, True W, Lin N, Toomey R, Eaves L. အမျိုးသားများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးအမျိုးမျိုးကိုအလွဲသုံးစားမှုတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးကွဲပြားမှုအားနည်းခြင်း ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1998;55(11): 967-972 ။ [PubMed]
68 ။ လာ DE ။ အဘယ်ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေလိုအပ်ဘာကြောင့် polygenic အမွေအဘို့: DRD2 ဗီဇလေ့လာမှုများမှသင်ခန်းစာများ။ အရက်။ 1998;16(1): 61-70 ။ [PubMed]
69 ။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာတားစီးမှုနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှု / အာရုံခံမှုကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် dopamine receptor D2 တွင်မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲနိုင်မှု၏ Hamidovic A၊ Dlugos A၊ Skol A၊ Palmer AA၊ de Wit H. အကဲဖြတ်ခြင်း - ကျန်းမာသောသင်တန်းသားများတွင် d-amphetamine နှင့်စူးစမ်းလေ့လာခြင်း။ Exp Clin Psychopharmacol ။ 2009;17(6): 374-383 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
70 ။ Lee Y, Han D, Yang K, Daniels M, Na C, Kee B, Renshaw P. စိတ်ကျရောဂါနှင့်တူသော 5HTTLPR polymorphic နှင့်စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်သောအင်တာနက်သုံးစွဲသူများတွင်စိတ်ထား။ အကျိုးသက်ရောက်စေ Disorders ၏ဂျာနယ်။ 2009;109 (1): 165-169 ။ [PubMed]
71 ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားများအတွက် Petry NM, Ammerman Y, Bohl J, Doersch A, Gay H, Kadden R, Molina C, Steinberg K. သိမှု - အပြုအမူဆိုင်ရာကုထုံး။ J ကို Clin Psychol နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ 2006;74(3): 555-567 ။ [PubMed]
72 ။ Teng EJ, Woods DW, Twohig အမတ်များ။ နာတာရှည်အရေပြားရွေးခြင်းအတွက်အလေ့အကျင့်ပြောင်းပြန်ပြုလုပ်ခြင်း - ရှေ့ပြေးစမ်းသပ်မှုတစ်ခု။ Behav Modif ။ 2006;30(4): 411-422 ။ [PubMed]
73 ။ Mitchell JE, Burgard M, Faber R, Crosby RD, de Zwaan M. သိမှုဆိုင်ရာအမူအကျင့်ဆိုင်ရာကုထုံးသည်ဝယ်ယူမှုမသန်စွမ်းမှု။ Res Ther ပြုမူနေ။ 2006;44(12): 1859-1865 ။ [PubMed]
74 ။ Toneatto T, Dragonetti R. ပြproblemနာလောင်းကစားခြင်းအတွက်လူထုအခြေပြုကုသမှု၏ထိရောက်မှု - သိမှု - အပြုအမူနှင့်ဆယ့်တစ်ဆယ့်နှစ်ဆင့်သောကုထုံး၏လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်။ နံနက် J ကိုစွဲလမ်း။ 2008;17(4): 298-303 ။ [PubMed]
75 ။ Dennon PN၊ Lowengrub K၊ Musin E၊ Gonopolsky Y၊ Kotler M. ၁၂ လကြာရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားများအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှုကိုလေ့လာခြင်း - အဓိကရလဒ်လေ့လာမှု။ J ကို Clin Psychopharmacol ။ 2007;27(6): 620-624 ။ [PubMed]
76 ။ Kim က SW, Grant က je, Adson DE, ရှင် YC ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏ကုသမှုကို Double-မျက်စိကန်း naltrexone နှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001;49(11): 914-921 ။ [PubMed]
77 ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းကိုကုသရာတွင် opioid antagonist nalmefene ကို Grant JE, Potenza MN, Hollander E၊ Cunningham-Williams R, Nurminen T, Smits G၊ Kallio A. Multicenter မှစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006;163(2): 303-312 ။ [PubMed]
78 ။ Grant JE, ကင်မ် SW, Hartman BK ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားတိုက်တွန်းမှုများကုသမှုအတွက် opiate ရန်တွေ့ naltrexone ၏ double- မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ -controlled ။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008;69(5): 783-9 ။ [PubMed]
79 ။ Grant JE, Desai RA, Potenza MN ။ နီကိုတင်းမှီခိုမှု၊ subsyndromal နှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်အခြားစိတ်ရောဂါဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုများ - အရက်နှင့်ဆက်စပ်သောအခြေအနေများဆိုင်ရာအမျိုးသားကူးစက်ရောဂါစစ်တမ်းမှအချက်အလက်များ။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009;70(3): 334-343 ။ [PubMed]
80 ။ Grant JE ။ naltrexone နဲ့ကုသ compulsive ဝယ်ယူမှုသုံးဖြစ်ပွားမှု။ Int J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှုအလေ့အကျင့်။ 2003;7: 223-5 ။
81 ။ Raymond NC, Grant JE, Kim SW, Coleman E. naltrexone နှင့် serotonin တို့မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကုသမှု - ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက်နှစ်ခု။ int Clin Psychopharmacol ။ 2002;17(4): 201-205 ။ [PubMed]
82 ။ Bostwick JM, Bucci ဂျေအေ။ naltrexone နဲ့ကုသအင်တာနက်ကိုလိင်စွဲလမ်း။ Mayo Clin proc ။ 2008;83(2): 226-230 ။ [PubMed]
83 ။ အာနိုး LM, Auchenbach MB, McElroy SL ။ Psychogenic excoriation ။ လက်တွေ့လက္ခဏာများ, အဆိုပြုထားရောဂါရှာဖွေစံ, ရောဂါနှင့်ကုသမှုမှချဉ်းကပ်မှု။ CNS မူးယစ်ဆေးဝါး။ 2001;15(5): 351-359 ။ [PubMed]
84 ။ Insel TR, Pickar N Naloxone အုပ်ချုပ်မှုသည်စွဲလမ်းမှု - မငြိမ်မသက်ဖြစ်သည့်ရောဂါ - အမှုပေါင်း (၂) ခု၏အစီရင်ခံစာ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1983;140(9): 1219-1220 ။ [PubMed]
85 ။ Roncero C, Rodriguez-Urrutia A, Grau-Lopez L, Casas အမ် Antiepilectic မူးယစ်ဆေးဝါးများ Impulses သတင်းပို့မမှန်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်။ Actas Esp Psiquiatr ။ 2009;37(4): 205-212 ။ [PubMed]
86 ။ ဂျွန်ဆင် BA, Rosenthal N, Capece JA, Wiegand F, Mao L, Beyers K, et al ။ အရက်သေစာမှီခိုမှုကိုကုသရန် Topiramate - ကျပန်းထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်မှု။ ဂျေအေအမ်အေ။ 2007;298(14): 1641-151 ။ [PubMed]
87 ။ Johnson BA၊ Swift RM၊ Addolorato G၊ Ciraulo DA၊ Myrick H. GABAergic ဆေးများ၏အရက်သောက်ခြင်းကိုကုသရန်အတွက်စိတ်ချရမှုနှင့်ထိရောက်မှု။ အရက် Clin Exp Res ။ 2005;29(2): 248-254 ။ [PubMed]
88 ။ Kampman KM, Pettinati H, Lynch KG, Dackis C, Sparkman T, Weigley C, et al ။ ကိုကင်းမှီခိုမှုကုသမှုအတွက် topiramate ကိုရှေ့ပြေးစမ်းသပ်မှုတစ်ခု။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2004;75(3): 233-240 ။ [PubMed]
89 ။ Grant JE ကင်မ် SW, Odlaug BL ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏ကုသမှုအတွက် N-acetyl cysteine ​​တစ် glutamate-modulating အေးဂျင့်: ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007;62(6): 652-657 ။ [PubMed]
90 ။ LaRowe SD, Myrick H, Hedden S, Mardikian P, Saladin M, McRae A, et al ။ ကိုကင်းအလိုဆန္ဒကို N-acetylcysteine ​​မှလျှော့ချသလား။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007;164(7): 1115-1117 ။ [PubMed]
91 ။ Mardikian PN, LaRowe SD၊ Hedden S၊ Kalivas PW, Malcolm RJ ကိုကင်းမှီခိုမှုကုသမှုအတွက် N-acetylcysteine ​​၏ပွင့်လင်းမြင်သာသောစမ်းသပ်မှု - ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007;31(2): 389-394 ။ [PubMed]
92 ။ Kalivas PW, Hu XT ။ psychostimulant စွဲအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တားစီး။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2006;29(11): 610-616 ။ [PubMed]
93 ။ အနက်ရောင် DW ။ မသင်မနေရဝယ်: ပြန်လည်သုံးသပ်။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1996;57 (Suppl 8): ၅၀-၄၄ ။ [PubMed]
94 ။ ko CH, ယန်း JY, ချန် SH ယန် MJ, လင်း HC, ယန်း CF. ရောဂါရှာဖွေစံနှင့်စိစစ်အဆိုပြုထားနှင့်ကောလိပ်ကျောင်းသားများကိုအင်တာနက်စွဲလမ်း၏ tool ကိုဖော်ထုတ်။ Compr စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009;50(4): 378-384 ။ [PubMed]
95 ။ အထမ်းသမား, G, Starcevic V ကို, Berle: D, Fenech P. ပြဿနာဗီဒီယိုဂိမ်းအသုံးပြုမှုကိုအသိအမှတ်ပြု။ Aust NZJ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010;44(2): 120-128 ။ [PubMed]
96 ။ Goodman အေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ: သတ်မှတ်ရေးနှင့်ကုသမှု။ J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 1992;18(4): 303-314 ။ [PubMed]
97 ။ Hollander အီး, Wong က CM ။ ခန္ဓာကိုယ် dysmorphic ရောဂါ, ရောဂါဗေဒလောင်းကစား, နှင့်လိင်မတော်မတရား။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1995;56 (ပျော့ပျောင်း 4): 7-12 ။ [PubMed]
98 ။ Lochner ကို C, Stein DJ သမား။ obsessive- compulsive spectrum ကိုရောဂါအပေါ်အလုပ် obsessive-compulsive ရောဂါ၏သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောနားလည်သဘောပေါက်ရန်အထောက်အကူပြုပါသလား prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006;30(3): 353-361 ။ [PubMed]
99 ။ Grant JE ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားအတွက်ဆုချီးမြှင့်တားစီးဘို့အသစ်သော pharmacological ပစ်မှတ်။ Neuropsychopharmacology ၏ 48th နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင်ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်း၏ဘာသာပြန်ခြင်းလေ့လာခြင်းဆိုင်ရာစာတမ်းဖတ်ပွဲတွင်တင်ပြသည်။ ဟောလိဝုဒ် FL ။ 2009 ။
100 ။ Lochner C, Hemmings SM, Kinnear CJ, Niehaus DJ, Nel DG, Corfield VA ။ obsessive-compulsive disorder နှင့်အတူလူနာအတွက် obsessive-compulsive spectrum ကိုမမှန်၏စပျစ်သီးပြွတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: လက်တွေ့နှင့်မျိုးရိုးဗီဇဆက်စပ်မှု။ Compr စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005;46(1): 14-19 ။ [PubMed]
101 ။ Potenza MN ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း, လောင်းကစားများနှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ၏အရေးပါမှု: စွဲအတွက် Translational သုတေသနအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Neuropsychopharmacology ။ 2009;34(13): 2623-2624 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]